Egwuregwu bọọlụ 44 kacha mma maka ụmụaka site na afọ | Nye m oge ntụrụndụ
Isaac | 17/12/2021 17:48 | Emelitere ka 21/12/2021 09:01 | General
Mgbe ị na-ahọrọ egwuregwu bọọlụ kacha atọ ọchị maka ụmụaka, a ghaghị iburu n'uche ọtụtụ ihe. N'otu aka ahụ, afọ dabara adaba nke emebere egwuregwu ahụ. Ajụjụ ọzọ bụ ma ọ̀ ga-egwu naanị ya ka ọ̀ bụ ụmụaka ndị ọzọ, ka ọ̀ ga-eso ndị mụrụ ya ma ọ bụ ndị toro eto gwurie egwu, ebe ọ bụ na e nwekwara. egwuregwu bọọlụ emebere maka onye ọ bụla. Ma, n'ezie, ọ bụrụ na egwuregwu ahụ bụ agụmakwụkwọ yana ihe na-atọ ụtọ, nke ukwuu ka mma.
N'ime ntuziaka a, ị ga-enwe ihe niile ịchọrọ họrọ nke kacha mma egwuregwu bọọlụ maka ụmụaka, na mgbakwunye na inwe ngalaba pụrụ iche maka egwuregwu bọọlụ agụmakwụkwọ. Nhọrọ dị mma na mmekọrịta ọha na eze karịa consoles na egwuregwu vidiyo. Ọbụna ndị ọkachamara na-adụ ha ọdụ na mmepe nke obere ụmụaka, ebe ọ bụ na ha na-azụlite nkà moto dị mma, nleba anya, ọhụụ gbasara ohere, itinye uche, echiche na imepụta ihe, ime mkpebi, wdg. Obi abụọ adịghị ya na nnukwu onyinye ...
1 Egwuregwu bọọdụ kacha ere maka ụmụaka
1.1 Egwuregwu Trajins - Nje Virus
1.5 Eduka - Lynx
2 Egwuregwu bọọdụ kacha mma maka ụmụaka site na afọ
2.1 Maka ụmụaka site na 2 ruo 3 afọ
2.1.1 Goula 3 obere ezi
2.1.2 M na-eji onyonyo amụ ihe
2.1.3 BEAN Adela anu
2.1.4 BEAN mbụ mkpụrụ
2.2 Maka ụmụaka site na 4 ruo 5 afọ
2.2.1 Etela nna!
2.2.5 Goliath jaw
2.2.10 Falomir kedu ihe m bụ?
2.3 Egwuregwu bọọdụ maka ụmụaka nọ n'agbata afọ 6 na 12
2.3.3 Nchụso efu Dragọn bọọlụ
2.3.6 Ụlọ egwu egwu
2.3.8 Hasbro arụ ọrụ
2.3.9 Hasbro na-bụ ọnye?
2.4 Egwuregwu ịkụzi agụmakwụkwọ
2.4.1 Ụlọ mmụọ
2.4.2 Ọnyà ụlọ nsọ
2.4.3 Agba anụ ọhịa
2.5 Egwuregwu bọọlụ maka ụmụaka na ndị okenye
2.5.1 500 mpempe egwuregwu
2.5.2 Ihe mgbagwoju anya 3D nke Sistemu Anyanwụ
2.5.3 Okpokoro egwuregwu ọtụtụ
2.5.6 Kpoo nke ahụ!
2.5.7 Njem mbụ
2.5.8 Mmegharị ahụ Hasbro
3 Ntuziaka ịzụrụ egwuregwu bọọlụ maka ụmụaka
3.1 akwadoro opekempe afọ
3.2 Ihe omumu
3.4 Portability na ịtụ
Egwuregwu bọọdụ kacha ere maka ụmụaka
N'ime ndị na-ere ahịa kacha mma, ma ọ bụ egwuregwu bọọlụ maka ụmụaka kacha ere na ihe ịga nke ọma, anọwo na ọkwa ahịa ahụ maka ihe doro anya. Ha bụ ndị a kacha amasị, na ndị a kacha mara amara, n'ihi ya, ekwesịrị ịkọwapụta ha nke ọma:
Egwuregwu Trajins - Nje Virus
Egwuregwu Tranjis - Nje Virus! -...
Ọ bụ otu n'ime ndị kasị ere, na ọ bụghị maka obere. Ọ bụ egwuregwu maka ndị egwuregwu 2, site na afọ 8 ma dabara maka ezinụlọ dum. Ọ na-eri ahụ ma na-atọ ụtọ nke ukwuu, dị mfe ibufe, na nke ị ga-eche nje virus nke ewepụtara n'ime ya ihu. Asọmpi iji zere ọrịa na-efe efe wee bụrụ onye mbụ na-ekpochapụ nje site na ikewapụ ahụ dị mma iji gbochie mgbasa nke ọrịa dị egwu.
Zụrụ nje virus
Ọ bụ otu n'ime egwuregwu bọọdụ doro anya maka ndị na-eto eto na ndị agadi. A na-akpọ ya na ntụgharị na okirikiri, yana usoro mmụta dị mfe iji nwee ike igwu egwu site na mmalite. Na mgbakwunye, ọ nwekwara akụkụ mmụta, yana ọnụọgụ ọnụọgụ ọnụọgụ abụọ ruru 100 iji mee agụta, yana gbakọọ iji lelee ohere.
Site na afọ 6 ị nwekwara egwuregwu ọzọ a n'etiti ndị na-ere ahịa kacha mma. Egwuregwu bọọlụ dị mma maka onye ọ bụla, ọkachasị maka nnọkọ. Ị ga-egosipụta nkà nke ọsọ, nleba anya na reflexes, na-achọta otu akara. Na mgbakwunye, ọ gụnyere minigames 5 ọzọ.
Libellud Dixit mbụ -...
Enwere ike ịkpọ ya site na afọ 8, ọ pụkwara ịbụ maka ezinụlọ dum. Ihe karịrị nde 1.5 rere na ọtụtụ onyinye mba ụwa bụ kaadị ọkpụkpọ nke egwuregwu a. Aha ya kwesịrị. O nwere kaadị 84 nwere ihe atụ mara mma, nke ị ga-akọwarịrị ka onye otu gị nwee ike ịkọ, mana na-enweghị ndị mmegide ndị ọzọ na-eme.
Eduka - Lynx
Educa - Lynx-Mbipụta...
Site na afọ 6 ị nwere egwuregwu bọọlụ a iji meziwanye reflexes na visual acuity, ya bụ, ịghọ lynx. Ọ na-agụnye ọtụtụ ụdị egwuregwu, ịnwe ịchọta ihe oyiyi gị na bọọdụ tupu oge eruo wee nweta ọnụ ọgụgụ taịlị kachasị elu.
Egwuregwu bọọdụ kacha mma maka ụmụaka site na afọ
Iji nyere gị aka ịbanye ndị họọrọ, n'ihi na nnukwu egwuregwu bọọlụ maka ụmụaka dị. Enwere ha maka afọ niile na maka mmasị niile, isiokwu, usoro eserese, maka ezinụlọ dum, wdg. N'ebe a, ị nwere ọtụtụ edemede kewara site na afọ ma ọ bụ isiokwu:
Maka ụmụaka site na 2 ruo 3 afọ
Nke a bụ otu n'ime ọnyá ndị kasị sie ike, ebe ọ bụ na ọ bụghị nanị egwuregwu bọọdụ ọ bụla ka a na-eme ka ụmụaka ndị a na-emekọrịta ihe, a ghaghịkwa ilezi anya pụrụ iche iji hụ na ọ dị mma. Dịka ọmụmaatụ, ha ga-adị mma, ha ekwesịghị inwe obere akụkụ nke nwere ike ilo, ma ọ bụ nkọ, na ọdịnaya na ọkwa kwesịrị ịdị elu nke obere ndị a. N'aka nke ọzọ, ha ga-ezutekwa ụfọdụ njirimara dị ka ịdị na-ahụ anya, dị mfe, na-elekwasị anya n'ịkwalite nkà dị ka nkà moto, nkà a na-ahụ anya, wdg. Ụfọdụ ndụmọdụ bara uru nke egwuregwu bọọlụ maka ụmụaka sitere na afọ 2 ruo 3 bụ:
Goula 3 obere ezi
Goula- Egwuregwu 3 ...
Akụkọ a ma ama nke 3 Little Pigs ghọrọ egwuregwu bọọlụ maka ụmụntakịrị. Na ohere igwu egwu na nkwado ma ọ bụ asọmpi mode. Enwere ike iji ndị egwuregwu 1 ruo 4 kpọọ ya, ma na-eje ozi iji mepụta ụkpụrụ dị iche iche. Banyere ebumnuche, enwere bọọdụ nwere usoro taịlị, obere ụlọ, ha ga-ebuga taịlị nke ezi ọ bụla n'ụlọ tupu anụ ọhịa wolf abịarute.
Zụta ezi ezì atọ ahụ
M na-eji onyonyo amụ ihe
Diset - Lectron m na-amụta ...
Egwuregwu nkuzi ọzọ maka ụmụaka sitere na afọ 3 nke na-agba mbọ ijikọ ajụjụ na azịza. Ha ga-enwe obi ụtọ mgbe ha na-akwalite nkà dị ka nkà a na-ahụ anya, ọdịiche nke ọdịdị, agba, wdg. Ọ nwere kaadị na isiokwu dị iche iche na usoro nhazi nke onwe ya ka onye nta ahụ wee nwee ike ịlele ma ọ zara ya nke ọma ekele maka pensụl anwansi nke na-enwu ọkụ na ụda.
Zụrụ m na-eji onyonyo amụ
BEAN Adela anu
Maya aṅụ abụghị naanị onye a ma ama. Ugbu a na-abịa egwuregwu bọọdụ mara mma maka ụmụaka sitere na afọ 2. Ọ bụ Adela bee, nke ga-adọta uche nke ụmụntakịrị maka agba ya na ebumnuche nke ịnakọta nectar site na okooko osisi ma buru ya gaa na ekwo Ekwo wee nwee ike ịme mmanụ aṅụ. Mgbe ite mmanụ aṅụ juru, ị ga-emeri. Ụzọ na-ewusi echiche nke ịdị n'otu, nghọta na mmụta agba.
Zụrụ Adela Bee
BEAN mbụ mkpụrụ
Egwuregwu HABA: Nke mbụ ...
Egwuregwu maka ụmụaka sitere na afọ 2. Mgbake nke kpochapụwo, dị ka El Frutal, ma e mere maka ụmụntakịrị, na-emegharị iwu na ha na ịkwado usoro. Ụzọ iji meziwanye nkà na ụzụ moto dị mma na imekọ ihe ọnụ, ebe ọ bụ na ị ghaghị imeri ọnụ, na nke a, ị ga-eti mkpu, nke ekwesịghị iri mkpụrụ osisi.
Zụrụ mkpụrụ mbụ
Falomir- Pịa Pirate ...
Nke a bụ egwuregwu ọzọ na-atọ ọchị maka ụmụaka sitere na afọ 3. O nwere ebe a ga-etinye gbọmgbọm, ebe a ga-ewebata onye ohi na-agaghị ama mgbe ọ ga-awụli elu. Ọ na-agụnye ịnya mma agha n'ime gbọmgbọm n'otu n'otu, na onye mbụ ga-eme ka onye pirate na-awụli elu ga-emeri.
Zụrụ Pirate Pin
Maka ụmụaka site na 4 ruo 5 afọ
Ọ bụrụ na ndị na-eto eto tọrọ, egwuregwu maka ndị na-eto eto ga-abụ nke nwata na-agwụ ike. Ha chọrọ egwuregwu dị iche iche lekwasịrị anya n'ịkwalite ụdị nka ndị ọzọ, dị ka echiche atụmatụ, itinye uche, ebe nchekwa, wdg. Ndị ahụ ụmụaka na-erubeghị afọ 5, ị nwere ike ịhụ egwuregwu bọọlụ na-atọ ụtọ maka ụmụaka n'ahịa:
Egwuregwu na-akpali akpali maka ụmụaka dị afọ 5 nke ha ga-agbagharị wheel wheel wee gafee n'ụgbọ mmiri. Ma ha ga-eme ya nke ọma, ebe ọ bụ na papa m na-ehi ụra n'àkwà ma ọ bụrụ na ị na-eme mkpọtụ, ị ga-akpọte ya ma ziga gị ka ị lakpuo ụra (laghachi na oghere mmalite nke bọọdụ ahụ).
Zụrụ Etela nna
Egwuregwu Hasbro 48380B09 ...
Ọ bụ egwuregwu bọọlụ emebere maka ụmụaka sitere na afọ anọ. Ịnyịnya ibu nke na-akpụ akpụ nke na-agba ụkwụ na-atụba ngwongwo niile, mgbe ọ na-agba, chioma agwụla, ihe niile i tinyere na ya na-amali elu n'ikuku. Egwuregwu a nwere ọkwa isi ike 4: onye mbido, etiti na elu. Ọ na-agụnye ihe ndị a na-akwakọba n'elu oche ịnyịnya ibu n'otu n'otu.
Egwuregwu Hasbro - Egwuregwu ...
Onye na-akụ pọmpụ a bụ nnukwu ọgbụgbọ, slob, ma ọ na-agbasi mbọ ike. Ụmụntakịrị ga-etinye ngwá ọrụ na belt n'aka nke ọzọ na ngwá ọrụ ọ bụla ga-eme ka uwe ogologo ọkpa ahụ daa ntakịrị. Ọ bụrụ na uwe ogologo ọkpa gị daa kpamkpam, mmiri ga-agbawa. Onye na-adịghị mmiri mmiri ga-emeri.
Zụrụ Sloppy Plumber
Ezi obere ezi a mara mma aha ya bụ Antón Zampón ga-anwale nkà nke ụmụntakịrị n'ule. Egwuregwu dị mfe nke ga-agụnye ịzụ agwa ruo mgbe uwe ogologo ọkpa ya gbawara. Ha nwere ike igwu egwu n'otu n'otu nke ndị egwuregwu 1 ruo 6, na-ekpori ndụ ịlele ole hamburgers ha nwere ike iri ...
Zụrụ Antón Zampon
Goliath jaws ...
Nke a bụ egwuregwu bọọdụ ọzọ maka ụmụaka, ebe ị nwere ike ịkụ azụ kacha atọ ụtọ. Agụụ na-agụ tuburon, ọ lodawokwa ọtụtụ azụ̀ ndị ị ga-echekwa site n'iji mkpara ịkụ azụ̀ napụta ha n'ọnụ ya. Ma kpachara anya, n'ihi na n'oge ọ bụla shark ga-ata ata. Onye ọzọ anụmanụ ị ga-azọpụta ga-abụ onye meriri.
Nsogbu- Party & Co Disney ...
Partylọ oriri na ọṅụṅụ a abịala, nke emebere nke ọma maka ụmụaka sitere na afọ 4, yana isiokwu Disney. Egwuregwu bọọdụ multidisciplinary nke ị ga-eji mụta ihe ma nwee anụrị. A na-eji ya maka ezinụlọ dum, na-enwe ike ịgafe ọtụtụ ule iji nweta ọnụ ọgụgụ nke ihe odide sitere na ụlọ ọrụ mmepụta ihe. Nnwale ndị ahụ yiri Party maka ndị okenye, na-anwale ule nke mimicry, eserese, wdg.
Egwuregwu Hasbro - oghere bọọlụ ...
Omuma nke na-adịghị apụ apụ n'ụdị. Ọtụtụ narị mkpọsa ngwá ahịa na telivishọn na-abịakwute Krismas ma ọ bụ oge ndị ọzọ mgbe a na-amụba ire ihe ụmụaka ji egwuri egwu. Egwuregwu bọọlụ maka ụmụntakịrị ebe hippos nke ndị egwuregwu anọ ahụ na-achịkwa ga-eloda bọọlụ niile enwere ike. Onye nwetara ọtụtụ bọọlụ ga-emeri.
Zụrụ oghere bọọlụ
Agụ iyi a bụ onye na-eribiga nri ókè, mana site n'iri nri nke ukwuu, ezé ya adịghị mma nke ukwuu, ọ chọrọ nyocha eze. Wepụ ọtụtụ ezé dị ka i nwere ike tupu ọnụ emechi, ebe ọ bụ na ị ga-ahụ eze na-emerụ agụ iyi mara mma. Egwuregwu ọzọ dị mfe nke na-akwado dexterity na ezi njem nke ụmụntakịrị.
Zụrụ Agụ iyi
Junior Grabolo, m na-egwu ...
Egwuregwu bọọdụ nkuzi na-atọ ụtọ maka ụmụntakịrị nọ n'ụlọ. Ọ dị oke ike ma na-enye gị ohere ịzụlite ikike iche echiche, nleba anya, mgbagha, na itinye uche. Ọ dị mfe nghọta, naanị ị ga-atụgharị dice ahụ ma ị ga-ahụrịrị ngwakọta nke pụtara n'etiti kaadị. Ọ na-enye ohere maka egwuregwu ngwa ngwa ma nwee ike zuru oke iji gaa njem.
Zụrụ Grabolo Jr
Falomir kedu ihe m bụ?
Falomir-Gịnị ka m bụ ...
Egwuregwu bọọlụ na-atọ ụtọ nke nwere ike ịbụ ọkacha mmasị, ọbụlagodi maka okenye igwuri egwu. Ọ na-enyere aka imeziwanye okwu ndị metụtara azụmaahịa, yana nkwado isi ebe ị ga-etinye kaadị nke onye ọ bụla na-ahụ ma e wezụga gị, ị ga-ajụkwa ajụjụ iji gbalịa ịmata onye agwa pụtara na kaadị ahụ. Egwuregwu a dị mma maka ịkwalite nkà moto, ọgụgụ isi na uche.
Zụrụ Gịnị ka m bụ?
Egwuregwu bọọdụ maka ụmụaka nọ n'agbata afọ 6 na 12
Maka otu afọ gụnyere n’agbata afọ 6 na 12E nwekwara egwuregwu bọọdụ pụrụ iche na-egbo mkpa nke afọ a. Ụdị akụkọ ndị a na-enwekarị ihe ịma aka ndị dị mgbagwoju anya, na-ewebata nkwalite nkà dị ka ebe nchekwa, usoro, mgbagha, itinye uche, nhazi, wdg. N'ime ndị kacha mma bụ:
Monopoly Classic na-enwekarị ihe ịga nke ọma, ọ naghị apụ apụ n'ụdị. Ugbu a na-abịa ụdị ọhụrụ kpamkpam dabere na egwuregwu vidiyo Fortnite. Ya mere, ọ gaghị adabere n'ọtụtụ akụ na ụba ndị egwuregwu na-enweta, ma oge ole ha jisiri ike dị ndụ na map ma ọ bụ bọọdụ.
Ee, egwuregwu vidiyo ihe okike na nlanarị ama ama Minecraft erutela ụwa egwuregwu bọọlụ. Onye ọkpụkpọ ọ bụla ga-enwe agwa nke ya, wee nakọta ọtụtụ ngọngọ akụrụngwa. Echiche bụ ịlụso ihe e kere eke nke ụwa ọ bụla ọgụ. Onye meriri ga-abụ onye mbụ ji ibe ha rụchaa bọọdụ ahụ.
Nchụso efu Dragọn bọọlụ
Njem ịchụ nta obere ihe ...
Ị nwere ike iche n'echiche ijikọ ihe ọchị nke egwuregwu Trivial Pursuit trivia na ụwa Dragon Ball anime. Ọ dị mma ugbu a ị nwere ihe niile dị na egwuregwu a na ngụkọta nke ajụjụ 600 gbasara saga a ma ama ka i wee gosipụta ihe ọmụma gị gbasara agwa ndị ọkacha mmasị gị.
Zụrụ obere ihe
Afọ Cluedo: Site na 8 ...
Egburu ogbugbu dị omimi. Enwere ndị a na-enyo enyo 6, na ị ga-agafe ebe a na-eme mpụ iji chọpụta ihe ndị na-eduga gị na ogbu mmadụ ahụ. Nyochaa, zoo, bo ya ebubo ma merie. Otu n'ime echiche kachasị mma na egwuregwu dị egwu na ahịa.
Ọ bụrụ na-amasị gị ihe omimi dị egwu, nke a bụ egwuregwu bọọdụ gị. Egwuregwu dị mfe ebe ị ga-agarịrị site na maze dị omimi iji gbalịa ịchọta ụfọdụ ihe furu efu. Ị ga-egosipụta obi ike iji gbalịa ịpụ na ihe ndị ahụ ma gafere na corridors nke labyrinth na-ezere nsogbu dị iche iche ị ga-ahụ.
Zụrụ Ime Anwansi Labyrinth
Ụlọ egwu egwu
The Castle of Terror The ...
Egwuregwu Atom ewepụtala egwuregwu bọọlụ a na-atụ egwu, yana kaadị 62 nwere agwa na ihe dị egwu. Site na ha ị nwere ike igwu egwu n'ụzọ dị iche iche (dịka onye nyocha, ọnọdụ ọsọ na ọnọdụ ebe nchekwa ọzọ), na-emeziwanye nkà nke ụmụntakịrị nọ n'ụlọ.
Zụrụ Castle nke ụjọ
Nsogbu - Game Party & Co ...
Ụdị ọzọ nke egwuregwu bọọlụ ama Party & Co maka ụmụaka. Ị ga-enwe ike ịmepụta otu ma nwee anụrị iji gafee ule dị iche iche. Onye mbụ ga-erute square ikpeazụ ga-emeri. Iji mee nke a, ị ga-agafe ule ịse, egwu egwu, mmegharị ahụ, nkọwa, ajụjụ, wdg.
Hasbro arụ ọrụ
Nke ọzọ nke oge ochie, egwuregwu gbasaara n'ụwa nile na nke na-anwale dexterity na ihe ọmụma anụ ahụ nke ndị egwuregwu. Onye ọrịa na-arịa ọrịa ma ọ dị mkpa ka a wara ya ahụ, wepụ akụkụ dị iche iche. Ma kpachara anya, ị chọrọ usu dọkịta na-awa, n'ihi na ọ bụrụ na iberibe metụ mgbidi imi gị ga-enwu na ị ga-efunahụ… Ma ọ bụrụ na-amasị gị minions, e nwekwara a version na ndị a odide.
Hasbro na-bụ ọnye?
Hasbro Gaming onye,...
Ọzọ nke aha mara ndị niile. Otu bọọdụ maka onye ọ bụla nke enwere usoro mkpụrụedemede mara mma. Ebumnobi ya bụ ịkọ nkọ ihe omimi nke onye mmegide site n'ịjụ ajụjụ na ịtụfu ihe odide ndị na-adabaghị n'ihe ndị ọ na-enye gị.
Buy Ọnye na-bụ?
Egwuregwu ịkụzi agụmakwụkwọ
Enwere ụfọdụ egwuregwu bọọlụ maka ụmụaka ọ bụghị naanị na-atọ ụtọ, kamakwa Ha na-agụ akwụkwọ, yabụ na ha ga-amụta site na igwu egwu. Ụzọ isi kwalite mmụta ụlọ akwụkwọ na-etinyeghị aka n'ọrụ na-agwụ ike ma ọ bụ na-agwụ ike maka ha, nke nwere ike ịnwe ọdịnaya nke omenala izugbe, mgbakọ na mwepụ, asụsụ, asụsụ, wdg. Ndị kacha mma na ngalaba a bụ:
Ụlọ ndị mmụọ...
Egwuregwu nkuzi egwuregwu na-atọ ụtọ iji zụlite ọhụụ gbasara ohere, idozi nsogbu, mgbagha nwere ihe ịma aka ọkwa dị iche iche na itinye uche. Otu n'ime ụzọ kachasị mma iji kwalite nkà mmụta na echiche mgbanwe na gamification.
Zụrụ Ụlọ nke Mmụọ
Ọnyà ụlọ nsọ
Ọnyà ụlọ nsọ - Smart...
Egwuregwu bọọdụ nkuzi a na-akwalite mgbagha, echiche mgbanwe, nghọta anya na itinye uche. Ị nwere ọkwa dị iche iche nke ihe isi ike ịhọrọ, yana ihe ịma aka 60 dị iche iche. Ihe mgbagwoju anya nke ikike iche echiche ga-abụ isi ihe na-egwu egwu.
Zụrụ ọnyà Ụlọ Nsọ
Agba anụ ọhịa
Nnukwu anụ mmiri,...
Egwuregwu bọọdụ agụmakwụkwọ na-eju ebe ndị egwuregwu na-agagharị na agba ndị na-anọchite anya mmetụta ma ọ bụ mmetụta, na-eme ka ọ bụrụ ụdị mmụta mmụta mmetụta uche maka ụmụaka dị n'etiti 3 na 6 afọ. Ihe a na-echefukarị n'ụlọ akwụkwọ na nke dị mkpa maka ahụike uche ha na mmekọrịta ha na ndị ọzọ.
Zụrụ nnukwu anụ mmiri agba
Egwuregwu emere maka ụmụaka karịrị afọ 4 na ebumnuche ịzụlite nka asụsụ na bekee na Spanish. Iji mee nke a, jiri usoro kaadị nwere onyonyo na okwu ndị ga-ejikọta ibe ha ka ha kwekọọ n'ụzọ ziri ezi.
Safari, egwuregwu nke ...
Egwuregwu nke ezinụlọ dum nwere ike isonye na nke ụmụntakịrị ga-amụta banyere anụmanụ na ọdịdị ala. N'ihe ruru anụmanụ na ntuziaka 72 dị iche iche n'asụsụ 7 (Spanish, Bekee, French, German, Italian, Dutch na Portuguese).
Egwuregwu bọọlụ maka ụmụaka na ndị okenye
Ị nwekwara ike ịchọta egwuregwu bọọlụ maka ụmụaka nke nwatakịrị nwere ike iji egwu egwu onye okenye so ya, ma ọ bụrụ nne, nna, nne na nna ochie, ụmụnne ndị tọrọ, wdg. Ụzọ isi na-elekọta ndị kasị nta n'ime ụlọ na-ekere òkè na egwuregwu ha, ihe dị mkpa maka ha nakwa maka ndị okenye, ebe ọ na-enye gị ohere itinyekwu oge na-amata ha ntakịrị mma. N'ezie mgbe ha tolitere, ha agaghị echefu oge ndị ahụ ị nọrọ na egwuregwu ndị dị ka:
500 mpempe egwuregwu
Ihe mgbagwoju anya nke iberibe 500 ...
Ihe mgbagwoju anya nke iberibe 500 nke ụwa Super Mario Odyssey Njem njem ụwa. Ụzọ isi wuo ezinụlọ, nke kwesịrị ekwesị maka ụmụaka sitere na 10 afọ. Ozugbo agbakọtara, ọ nwere akụkụ nke 19 × 28.5 × 3.5 cm.
Zụrụ egwuregwu mgbagwoju anya
Ihe mgbagwoju anya 3D nke Sistemu Anyanwụ
Ravensburger - ihe mgbagwoju anya 3D, ...
Ụzọ ọzọ ị ga-esi gwuo egwu ma mụta gbasara mbara igwe bụ ịmepụta ihe mgbagwoju anya 3D nke usoro mbara ala. O nwere mbara ala 8 nke Sistemụ Anyanwụ na mgbanaka mbara ala 2, na mgbakwunye na anyanwụ, yana iberibe 522 ọnụ na mkpokọta. Ozugbo egwuregwu ahụ gwụchara, enwere ike iji ya dị ka ihe ịchọ mma. Maka afọ kachasị mma, ọ bụ site na 6 afọ.
Zụrụ egwuregwu mgbagwoju anya 3D
Okpokoro egwuregwu ọtụtụ
ColorBaby - Tebụl ...
N'otu tebụl ị nwere ike ịnwe egwuregwu 12 dị iche iche. Ọ nwere akụkụ nke 69 cm elu, na osisi nwere elu nke 104 × 57.5 cm. Gụnyere ọtụtụ egwuregwu nwere ihe karịrị iberibe 150 na mbara ihu maka igwu ọdọ mmiri, bọọlụ tebụl, hockey, tenis tebụl, chess, checkers, backgammon, bowling, shuffleboard, poker, akpụkpọ ụkwụ inyinya na dice. Kwesịrị ekwesị maka ụmụaka sitere na afọ 6 na ezinụlọ dum. Ụzọ isi nyere aka wulite nka moto, nka aka, echiche ezi uche na mmụta.
Egwuregwu Mattel Scrabble ...
Site na 10 afọ, egwuregwu a nwere ike ịbụ otu n'ime ihe na-atọ ụtọ ma na-atọ ụtọ maka ezinụlọ dum na afọ. Ọ bụ otu n'ime egwuregwu ndị kacha ewu ewu, na-ekpori ndụ okwu mkpoputa iji nweta akara okwute kacha elu na taịlị 7 random nke onye ọkpụkpọ ọ bụla na-ewere. Ụzọ na mgbakwunye na ịkwalite okwu.
Egwuregwu Mattel- Ihe atụ
Ọ bụ egwuregwu ọzọ a kacha mara amara, ụdị egwuregwu ịse eserese nke ị ga-agbalị ime ka ha chepụta ihe ị chọrọ iji eserese gị gosipụta. Ekwesịrị ịkpọ ya n'ìgwè, ọ ga-edobakwa gị n'ọnọdụ dị egwu, ọkachasị ndị otu ndị nka nka bụ Picasia ...
Zụta akụkọ ifo
Kpoo nke ahụ!
Kpoo nke ahụ! - The...
Ọ bụ otu n'ime egwuregwu bọọlụ ga-eme ka ị kwagharịa wee mee ụdị ule nzuzu niile. Ihe ịma aka ị ga-emeri, yana ule 160 na-akpa ọchị nke ị ga-afụ, itule, juggle, ima elu, ikpo, wdg. Ọchị kariri nkwa.
Zụrụ kụrụ nke ahụ!
Ụbọchị Ijuanya - Nke mbụ ...
Otu n'ime egwuregwu ụmụaka na-ahụ n'anya mana nke dabara maka ezinụlọ dum. Maka ndị nwere mkpụrụ obi nke ndị na-eme njem na-aga njem ụgbọ oloko a na-agba ọsọ ọsọ site na isi obodo Europe na nnukwu map ebe ha ga-anwale gị. Onye ọkpụkpọ ọ bụla ga-anakọta ibu ụgbọ ala iji wuo ụzọ ọhụrụ wee gbasaa netwọk ụgbọ oloko. Onye dechara tiketi maka ebe ọ na-aga na-emeri egwuregwu ahụ.
Zụrụ njem nke mbụ
Mmegharị ahụ Hasbro
Mmegharị egwuregwu Hasbro...
Ọ bụrụ na-amasị gị egwuregwu na-elekwasị anya na-eme ka ị na-achị ọchị, mgbe ahụ nke a bụ ọzọ nke ndị ahụ. Soro ezinụlọ na ndị enyi gị niile nwee ọkwa nka dị iche iche 3. N'ime ya, ị ga-eme nmimi ngwa ngwa iji gbalịa mee ka ha ghọta gị, yana nnukwu akwụkwọ akụkọ nwere kaadị 320.
Zụrụ mmegharị ahụ
Egwuregwu bọọdụ a na-eweghachi gị azụ na narị afọ nke iri abụọ, n'etiti nyocha. Egwuregwu egwu egwu ebe a na-achọpụta agwaetiti dị omimi n'etiti oke osimiri na akụkọ ya na-ekwu na ọ na-ezobe akụ. Mana ndị na-eme njem ahụ ga-eche ihe mgbochi dị iche iche ihu, nnukwu anụ mmiri, na ... ugwu mgbawa na-agbawa nke ga-eme ka agwaetiti ahụ imi nke nta nke nta.
Zụrụ Agwaetiti ahụ
Carcata - Egwuregwu bọọdụ na ...
Carcata na-agwakọta njem na atụmatụ. N'ime ya, ị ga-etinye ebo gị n'àgwàetiti nke nwere ugwu mgbawa wee gosi nke bụ ebo kachasị ike nke na-adị ndụ n'ihe ize ndụ nke ebe a nwere. Chebe mpaghara gị, nyochaa mmegharị nke ebo na-emegide, gaa n'ihu, na-anakọta bara nnukwu uru ma na-elegide anya mgbe niile na mmụọ na-echebe agwaetiti ahụ ...
Ntuziaka ịzụrụ egwuregwu bọọlụ maka ụmụaka
Foto efu (egwuregwu bọọlụ ụmụaka) sitere na https://torange.biz/childrens-board-game-sea-battle-48363
Ịhọrọ egwuregwu bọọlụ abụghị ọrụ dị mfe, ebe ọ bụ na enwere ọtụtụ edemede na aha ndị a na-ewepụta n'ahịa. Ma ịhọrọ egwuregwu bọọlụ maka ụmụaka dị mgbagwoju anya karị, ebe ọ bụ na ekwesịrị iburu n'uche ihe ụfọdụ. maka nchekwa nwata:
akwadoro opekempe afọ
Egwuregwu bọọdụ maka ụmụaka na-enwekarị ihe ngosi nke kacha nta na kacha afọ nke ha bu n’obi maka ya. Asambodo na-eme ka ha dị irè maka otu afọ ahụ dabere na njirisi atọ dị mkpa:
Nche: dịka ọmụmaatụ, ụmụaka nwere ike ilo iberibe dị ka dice, tokens, wdg, ya mere egwuregwu maka afọ ahụ agaghị enwe ụdị mpempe akwụkwọ ndị a. Ọ dị mkpa na ngwaahịa a nwere asambodo CE, ịmara na ọ gafere ụkpụrụ nchekwa EU. Kpachara anya maka adịgboroja na ihe egwuregwu ụmụaka ndị ọzọ na-esi Eshia na-enweghị njikwa ndị a…
IkikeỌ bụghị egwuregwu niile nwere ike ịbụ maka afọ ọ bụla, ụfọdụ nwere ike ọ gaghị adị njikere maka ụmụntakịrị, na ha nwere ike isi ike ma ọ bụ na-agaghị ekwe omume, na ọbụna mebie nkụda mmụọ na ịkwụsị egwuregwu ahụ.
Ọdịnaya: ọdịnaya dịkwa mkpa, ebe ọ bụ na ụfọdụ nwere ike ịnwe isiokwu ndị a kapịrị ọnụ maka ndị toro eto na ndị na-ekwesịghị ekwesị maka ụmụaka, ma ọ bụ nanị na otu afọ na-adịghị amasị n'ihi na ha aghọtaghị ya.
Njirimara a abụghị ihe dị egwu, mana ee dị mkpa. Ọ dị mma ịmara mmasị na mmasị nke onye nnata egwuregwu ahụ, ebe ọ bụ na ha nwere ike ịmasị ụfọdụ ụdị isiokwu (sayensị, ihe omimi, ...), ma ọ bụ na ha bụ onye na-akwado ihe nkiri ma ọ bụ usoro telivishọn (Akụkọ egwuregwu ụmụaka). , Ndewo Kitty, Dragon Ball, Rugrats,…) nke egwuregwu ya ga-akpali gị nke ukwuu igwu egwu.
Njirimara a abụghị naanị metụtara ọnụahịa, kamakwa na nchekwa nke egwuregwu ahụ (ọ bụghị nkebi n'ime obere iberibe nke nwere ike ime ka ị kpagbuo, mpempe nkọ na-akpata mmerụ ahụ ...) na anwụ ngwa ngwa. Egwuregwu ụfọdụ nwere ike na-agbaji ngwa ngwa ma ọ bụ ghara ịka nká ngwa ngwa, yabụ nke a bụ ihe ị ga-echekwa.
Portability na ịtụ
Ihe ọzọ dị mkpa bụ ịchọta egwuregwu na-abata igbe ma ọ bụ akpa ebe ị nwere ike ịchekwa ihe niile. Ihe kpatara ịṅa ntị na nke a bụ:
Ka nwata wee si n’otu ebe gaa ebe ọzọ n’ụzọ dị mfe.
Kwado usoro mgbe egwuregwu ahụ kwụsịrị site n'ịkpọ ya ka ọ buru ya.
Enwere ike ịchekwa nke ahụ ngwa ngwa.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Nye m oge ntụrụndụ » General » Egwuregwu kachasị mma maka ụmụaka